STRAWBERRY "VICODA": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO SIFOOYINKA, BEERAHA IYO DARYEELKA - STRAWBERRIES
Strawberry waa laga yaabaa mid ka mid ah nooca ugu caansan oo loo jecel yahay. Malaha, ma jiro beer beer ah, beerta khudradda leh ama xagaaga xagaaga, meel kasta oo uu korayo. Herlooga ugu horreeya iyo tan dheer ee la sugayay waxay u muuqdaan mucjiso - waxay aad u quruxsan yihiin, casiir leh oo dhadhan fiican leh. Sannad kasta waxaa jira noocyo cusub, waana arrin aad u adag in lagu dhex maro kala duwanaanshahan.
Nooc cagaarsho ah "Vicoda" oo ay soo saareen xoolaha Dutch. Nooca weyn ee noocyada kala duwan sababtoo ah dhadhanka cajiibka ah, qoob ka ciyaara, quruxda dabiiciga ah iyo midhaha midhaha. Bushka waa xoog iyo xoog leh, dherer dhexdhexaad ah, oo leh caleemo awood leh. Caleemaha waa weyn, oo la gooyey, oo ah mid fudud. Muuqaal wanaagsan waa tiro yaryar oo dufan ah. Berry waa weyn, u dhow qaab muuqaal ah, midab casaan leh. Miisaanka caadiga ah ee berry - 50-70 g, mass ee "curadka" waxay u timaadaa 120 g. Berry waa cufan, oo aan lahayn godad. Ciyaal ku filan, inkasta oo ay leedahay dufan, laakiin dibad qurux badan, iyo cherry khafiif ah ka dib casaxaad. Waxyaabaha kala duwan ee goosashada - goosashadu waxay bilaabmaysaa toban sano saddexaad ee bisha Luuliyo.
Ma taqaanaa? Strawberry - aphrodisiac asalka dabiiciga ah. In miraha ee berry waa wax badan oo zinc ah, taas oo kordhiya soo jiidashada labada jinsiga iyo sii kordhaya by rubuc ah suurtogalnimada rimayga. Qalabkaan berrinka ayaa muddo dheer loo yaqaanay Faransiiska. Waxaa u mahadcelineysa in dhawaan la soo iibsaday casho ka hor habeenkii arooska waxaa loo adeegsaday maraq macmacaanka strawberry, oo la karkariyey kareem.
Kala duwanaantan ayaa leh qaababka qaarkood oo u qalma inay dareenka siiyaan:
berry ugu horeeya waa mid aad u ballaaran, inta badan laban laaban ama lakulmay dhinacyada, waxay markaa helayaan qaab sax ah, habboon;
uurjiifku si sahlan ayaa looga soocaa sepal, tanina maaha wax saameyn ah gaadiidka dambe iyo kaydinta;
caarada cad ee berriga waa calaamad muujinaysa baddashay;
"Vicoda" waxay u dulqaadanaysaa jiilaalka iyo dhirteena.
dhalidda sare - illaa 1 kg duurka;
Berry ballaaran oo leh dhadhan fiican;
gaadiid aad u fiican, iyada oo aan la soo bandhigin bandhigid;
wuxuu u dulqaadanayaa jiilaalka iyo barafka;
iswaafajinta noocyada kala duwan ee cimilada;
berry waa ku habboon yahay isticmaalka, cayriin, barafaysan, qasacadaysan.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah cilladaha yar yar ma dabooli doonaan muuqaalka quraacda leh:
kuleylku waa u xun yahay uurjiifka uurjiifka;
Buundada waxay u baahan tahay meel (masaafada u dhexaysa deriska waa inay ahaato mid weyn), xaaladani maahan mid ku habboon cariishyada yaryar.
Waa muhiim! Waxaa jira sukrose ka badan liin ka badan strawberry, iyo strawberry vitamin C ka badan (ascorbic acid) ka badan liin. Taasi waa xaq: liin waa ka macaan badan iskirberiga. Berry Tani waxaa ku jira ku dhowaad lahayn sonkor. Cunista strawberries kaliya, waxaad lumin kartaa dhowr rodol gudaha 3 maalmood.
Diyaarinta ciidda oo habboon
Cagaarshow "Vicoda", sida hore loogu soo sheegey, waa mid sarreeya oo ku habboon cimilada, laakiin weli, ka hor intaadan bilaabin sii kordhinta, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa qaar ka mid ah waxyaalha agrotechnik. Waayo, noocyada kala duwan, carrada madow, loam iyo dhulalka kaynta ayaa noqon doona ciidda ugu fiican. Qoto dheer ee biyaha dhulka ah ma aha wax ka yar 70-90 cm Cabbirka lagu taliyey ee ciidda waa pH 2.7-6.2. Waxay dareemaan fiicnaan ka dib basasha, toon, marigolds. Isla meel isku mid ah waxaa loo isticmaali karaa hoosta strawberries muddo 3-4 sano ah. Kala duwanaantu waxay jecel yihiin iftiinka qorraxda, inay maskaxda ku hayaan markaad sameysid meel ay sariiraha u doortaan. Ka hor inta aan la beeri, caws waa in laga saaraa sariirta mustaqbalka. Ka dibna waa inaad bacrimisaa dhulka oo leh arrin bakeeriga ah iyo qodo. Diyaarso ciidda beeritaanka guga waa inuu dhaco xilliga dayrta. Marka ay dhacdo in aad qorshaynayso inaad ku beeri geedo xagaaga ama dayrta, waxaad u baahan tahay inaad dhulka u diyaariso 25-35 maalmood ka hor intaadan beeran. Waa lagama maarmaan in la sameeyo si ay ciidda u leedahay waqti ay ku degaan, haddii kale xididdadu waxay noqon doontaa dhali, taas oo si xun u saameeya koritaanka ee seedling.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorato geedo tayo leh. Noocyada geedo "Vicoda" waa inay noqdaan kuwo xoog leh, caafimaad qaba oo xoog leh. Fikradda waa in la siiyaa faahfaahinahan:
xididka qoorta ee xididka waa inuu ahaadaa ugu yaraan 7 mm;
xididdada - xoqan, oo leh geedi socod ka badan 7 cm;
oo dhan, bilaash ah cillado, kelyaha sare iyo 3-6 caleemo aan hoos udhicin oo caadi ah.
Ma taqaanaa? Strawberry ugu weyn, oo miisaankiisu dhan yahay 230 g, ayaa la soo qaaday 1983-kii Maraykanka.
Dhowr maalmood ka hor intaan la dhicin geedo dhulka waa in la adkeeyo. Si tan loo sameeyo, muddo 1.5-2 maalmood ah, ku rid meel qabow ah Si aad u ilaaliso sapidda ka soo cayayaanka iyo kiciyaan koritaanka ee xididdada dhinaca, gooyaa xididada 4 cm. Geedo la beeray bishii Maarso ama dhammaadka xagaaga - bilawga xilliga dayrta. Haddii aad go'aansato inaad ku beerato strawberries guga, taasi waa in la sameeyaa ka dib markii barafku dhalaalay, marka ciidda diirimaad ku filan.
Dhirta kuugu jirta noocyada kala duwan ee noocyada cagaarka ah sida "Queen Elizabeth", "Elsanta", "Marshal", "Asia", "Albion", "Malvina", "Masha", "Tsarina", "Ruush Size", " Festival, Kimberly iyo Lord.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan beerashada strawberries:
Waa in aadan ka waabanin beerashada xagaaga-xilliga dayrta ee geedo, haddii kale, aan la qabtay, waxay u dhiman karaa dhaxan.
Isku day in aad dooratid maalinta qalliinka, marka qorraxda cirka ah lagu dabooli doono daruuraha, ama ugu yaraan maalinti qumman. Haddii lagu beeray qorraxda iftiin leh, qeybta soo socota ee bilaha ah geedo waa inay ahaadaan kuwo dildillaacaya.
In sariirood ee beerta mustaqbalka sameeyo qaabka soo socda: xakamaynta - 0.5-0.6 m, masaafada u dhaxaysa godadka - 0.4 m.
Ku shub biyo hoose ee godka iyo dhirta seedling halkaas. Tani waa in lagu sameeyaa hab sidaas u ah nidaamka xididka geedka ee ku yaala si xor ah. Si taxaddar leh oo si adag ugu dheji dhulka iyo hubi in qoorta xididka, taas oo ah meesha koritaanka, waa la degay dhulka.
Xiritaan ciidda oo si khafiif ah u daadi.
Mulch dhulka ku leh humus, tallaabadani ma oggolaanayso samaynta daloolka on ciidda.
Strawberry "Vicoda" wuxuu jecel yahay biyaha, waa lagama maarmaan in la sameeyo miro. Ha illoobin haddii aad rabto in aad hesho goosashada wanaagsan. Laakiin iyadu ma jecla nitrogen, sidaas darteed taxadar leh Bacriminta nitrogen.
Haddii aad leedahay goob yar, waxaad ku dhisi kartaa sariirta gudubta ama sariirta qotomaalka ah ee loogu talagalay strawberries sii kordhaya.
Haddii marxaladda beerto ay aad muhiim u tahay, markaa daryeelka dhirta la beerto iyo kuwa la aasaasay ayaa ah kan ugu muhiimsan. Inta badan, badanaa, sababtoo ah daryeel aan haboonayn, ama sababtoo ah maqnaanshaha, ballan qaad ah oo ballan qaad ah oo ballanqaadyo ah si uu u siiyo miro fiican. Si looga hortago tani inay dhacdo, raac talooyinkeena.
Sidii hore loogu sheegay - "Vicoda" ayaa jecel biyo. Xasuuso xeerkan! Guga, iyada oo ku xidhan badi roobab dabiici ah, waraabinta waa in la sameeyaa 1-2 jeer toddobaadkii. Inta lagu jiro xilliga dhan ee koritaanka iyo fruiting, waxaa lagama maarmaan ah in mulch geedka. Nidaamkan uma oggolaan doono ciidda inay qalajiso. Guga waa inaad quudiso geedka.
Gobollada strawberries dayrta iyo gu'ga.
Tani waa in la sameeyaa iyadoo loo eegayo qaabka soo socda:
March - Bacriminta nitrogenous (in tiro yar). Digaaggu waa mid hodan ku ah nitrogen, waa in aan lagu xadgudbin, sidaas darteed samee xalka daciifka ah (1 koob oo qashin ah 1 baaldi biyo ah). Si loo sii wado 3 cisho, ka dib bangi kasta barkeed kasta 0.5 litir oo faleebo ah;
Abriil - macaadin. Caag dhalada qoryaarka ah waa in lagu qasi karaa 1 litir oo biyo kulul. Isku darka soo baxa waa inuu istaagaa 1-2 maalmood, kadibna waxaa lagu daraa 9 litir oo biyo ah iyo sariiraha (1 l halkii 1 sq. M) ayaa lagu waraabiyaa xal (17 l). Ammophoska wuxuu u baahan yahay in lagu qaso amooniyam amooniyam (2: 1) xalka dareeraha iyo geedi socodka sariiraha (qiyaasta 15 g halkii 1 sq. M);
May waa mid dabiici ah. Digada - 2 koob oo baaldi ah (10 l) oo biyo ah oo lagu daro qaado oo ah sodium sulfate. Si fiican u walaaq oo biyo biyo kasta (1 l) ku walaaq ama ku rusheeyo digada ku xeeran baadiyaha, daboolay dusha sare leh lakabka dhulka 3 cm qaro weyn.
Waa muhiim! Bacriminta macdanta waa in aan la adeegsanin mudo ka yar 15 maalmood ka hor inta aan berry dhicin.
Inta lagu jiro ubax iyo goosashada, strawberries waa in la waraabiyaa 2-4 jeer toddobaadkii. Inta lagu jiro dhismaha midhaha ha ilaawin inaad ku shubto ciidda. Sidoo kale:
cawska sariirta, ma siinayo fursad ay ku koraan cawska;
ka hor ubax ee xiga waa warshad waa in la bacrimiyo xal biyo-sulfate;
Ka dib goosashada, bacrimin waa in lagu daboolaa xal xashiish alwaax, sida kor ku xusan.
Xilliga dayrta, waxay noqon doontaa mid ku filan in ay lahaato laba waraabin, ilaa uu barafku ugu horeeyo u dhowaado. Waraabinta waa in lagu daraa codsiga macdanta macdanta. Intaa waxaa dheer, raac tilmaamahan:
maaha inay qiimeeyaan digada cusub xilliga dayrta, iyada oo la duldhigay boodhka;
saaro caleenta hore iyo shaaribada;
si taxadar leh u baaro geed walba: haddii ay xididdadu ka muuqdaan ciidda. Haddii ay sidaas tahay, iyaga ku rusheeyso, haddii kale waxay qaboojin karaan qabowga;
Mulching waa qayb muhiim ah oo kaa caawin doona inaad u wareejiso dhaxan xilliga qaboobaha. Mulching jiilaalka waxaa la fuliyaa iyada oo la isticmaalayo cirbadaha geed, caws, caleemo.
Ku dhowaad dhaxan, ku dabool sariiraha leh laamood. Waxay ka caawin doonaan inay qabtaan barafka, abuuraan dabocase dabiici ah. Iyadoo bilawga xilliga gu'gii koowaad ee kulaylka, dhammaan rinjirta kulaylka ayaa u baahan doonta in laga saaro. Si aad u daahiso tani waa wax aan macquul ahayn, maadaama ay dhirta ka hor istaagi karto.
Sida aad ogtahay, strawberries waa mid aad u jilicsan, waxa aad u adag in la ilaaliyo iyaga marka loo koro. Sidaa daraadeed, goosashada waa inay billaabataa dhowr maalmood ka hor inta aaney dhicin. Xaaladdan, waxaa suurtagal ah in la keydiyo muddo waqti dheer ah. Si aad u kaydiso miro yar oo wanaagsan, yar oo qallalan. Large, oo leh saxarka casiir leh, dhuftey dhaqso. Talooyinka lagu ururinayo iyo kaydinta berry waa sida soo socota:
strawberries ee aad go'aansatay in lagu hayo kaydinta, si ka wanaagsan inaad ku dhufato leh asliga ah (4-6 cm);
waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato strawberries subaxdii, ka dib markii dharabku soo degay, ama fiidkii, wax yar ka hor qorrax dhaca;
waxaa fiican inaad ku kaydiso berri ee sanduuqyada daboolay wargeyska, si siman hal lakabka;
ka hor inta aadan ku ridin strawberries ee kaydinta, kala soocida ma u qalantaa, samayn nidaamka this dhalmada ka dib;
Ma taqaanaa? Iyadoo loo eegayo gebi ahaanba fitamiinada kooxda B, strawberry waa antidepressant dhab ah. Haddii aad ka cabanayso walbahaar, isticmaalka maalin kasta ee 200 g ee berry wuxuu caadiyan u yahay xaaladdaada maskaxdaada wuxuuna xasiliyaa asalka dareenka.
ka dib goosashada iyo keenista goobta kaydinta, sida ugu dhakhsaha badan, dalagga waa in la qaboojiyaa 0 ... +2 ° C. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u samayso tan, muddada dheer (malaha xataa 3-4 maalmood) berriiga ayaa ku sii jiri doona cusbada;
strawberries aan la dhaqi karin, waa in lagu kaydiyaa dhalooyinka ku jira. Waxaa lagama maarmaan ah in aad si taxaddar leh u wareejiso weelka, si taxadar leh u kormeereyso berrin kasta si khudradda miraha aan ku dhicin aysan ku dhicin kusaddii, haddii kale cawska deriska ah ayaa laga yaabaa inay xanuunsadaan. Maskaxda ku hay in mudada ugu badan ee kaydintaas ay tahay saddex illaa afar maalmood, haddii aad wax kasta si sax ah u sameysay.
Waxaa jira hab kale oo lagu keydiyo - qaboojiso. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad dhaqdaa miraha beeraha, ha u qalajin, gogol dhigo lakabka keliya ee shukumaanka. Haddii aad ka cabsaneysid inaad tuugada ku dhufato juuska ee berry - isticmaal warqad. Marka ay berry qallajiyaan, ku dhaji baakadaha ama isla markiiba xagga hoose ee basaska qaboojiyaha, bacaha bacda ee hore loo dhigay.
Waa muhiim! Xasuuso: xadgudubka ugu yar ee sharafta beeraha ku dhowaad isla markiiba waxay keenaysaa dhaawac. Sidaa darteed, strawberries la soo ururiyey loogu talagalay kaydinta waa inaan la taaban dhammaan.
Marka strawberry oo dhan ay adag tahay, ku soo qaado hal baakad oo ka tago saxarada qaboojiyaha. Si dhakhso ah u berry berry khafiif ah, laakiin ilaa markaas ka dibna waa xoog leh oo aad u dhadhan fiican leh, ku dhowaad sida cusub.
Strawberries sidoo kale waxaa lagu kori karaa guriga, in lagu koriyo, iyo iyada oo aan ciidda.
Vicoda waa kala duwanaansho aad u fiican oo ka mid ah midhaha ugu caansan, lafaha iyo caanaha. Haddii aad tahay ninkii beerta ka shaqaynayay oo weli qorsheynaya inuu isku dayo inuu dhirta beeraha ku dulqaado, ha ka waabanin labaad. Oo haddii aad rabto in aad isku daydo qurux badan oo casiir leh, ma adkaan doonto inaad hesho "Vicodu" suuqa suuqyada.
Vikoda - mid ka mid ah noocyada ugu fiican Dutch, Bisaylkiisa goor dambe. Waxay si fiican u koraan xaaladaha qaboobaha. Berry waa mid aad u ballaaran, ilaa 120 g, casiir leh oo dhadhan fiican leh, shanlaha-qaabeeya, casaan mugdi ah, cufan, si sahlan loo qaado fogaanta fog. Ripens bartamihii July. Dhibaato kuma dhacdo cudurada fangas. Mid ka mid ah noocyada ugu jiilaalka-adag ee xulashada shisheeye. Hagaajinta qaboojinta, ka dib markii taas oo berry ah u hesho caraf udgoon iyo dhadhan, ilaalinta texture iyo cufnaanta ee berry cusub.
Waxaan haystaa Vicoda muddo 4 sano ah, tani waa noocyo kali ah oo isku dayaya in ay mar kale dillaacaan xilliga dayrta xaaladaha MO. Dhadhanka dhabta ah maahan nooc macmacaanka ah, sida noocyada kala duwan ee strawberry. Laakiin marka la barbardhigo noocyada kale ee remontant, Wim Xima iyo Wim Rin, tusaale ahaan, waxay leeyihiin dhadhan ka badan. Miro cufan, ciriiri, qaab qurux badan. Fasalka kaliya ee dayactirka waxaan rabaa inaan ka tago goobta